Akụkọ - China Railway Express Na-enye Nduzi Ọhụrụ na Transportgbọ njem Worldgbọ oloko Worldwa
Railgbọ okporo ígwè China Rail na-enye ntụziaka ọhụrụ maka ụgbọ njem ụgbọ oloko ụwa
Railgbọ okporo ígwè China Rail na-enye Nduzi Ọhụrụ na Transportgbọ njem Railgbọ oloko ;wa; China Railway Express, ụgbọ oloko mbu nke ga-apụ na China wee gafee Europe site na iji Marmaray, nabatara ya na ọdụ Ankara na mmemme emere na 06 Nọvemba 2019. China na Europe, nke emepụtara na akara na mgbanaka ọla edo nke Turkey "Otu Belzọ Belt Project "nke ụgbọ okporo ụzọ izizi rutere na Ankara.
China Railway Express, ụgbọ oloko mbu nke ga-apụ na China wee gafee Europe site na iji Marmaray, nabatara ya na ọdụ Ankara na emume emere na 06 November 2019.
Mịnịsta nke njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turhan, Mịnịsta nke Azụmaahịa Ruhsar Pekcan, General Director nke lọjistik na Terminals nke Georgia Railways Lasha Akhalbedashvili, Onye isi oche nke National Railways nke Kazakhstan Sauat Mynbaev, Deputy Minister of Economy of Azerbaijan Niyazi Seferov, Deputy Minister of Transport nke Kọmitii Party Party nke Shaanxi Adil Heping Hu Karaismailoğlu, TCDD General Manager Ali İhsan Uygun, TCDD General Manager of Transport Kamuran Yazıcı, Bureaucrats, ndị ụgbọ okporo ígwè na ụmụ amaala jikọrọ aka na Ministry of Transport and Infrastructure bịara.
Transport na Infrastructure Minister na okwu ya na ememe Mehmet Cahit Turhan, atọ kọntinent rụtụrụ aka na Turkey si geostrategic na geopolitical mkpa nke na-ejikọ.
E kwupụtara Turhan, Eshia yana ọnọdụ ala nke ọdịnala na ọdịnala, Europe, Balkans, Caucasus, Middle East, Mediterenian na Oké Osimiri Ojii dị ka ọrụ dị mkpa na mmepe akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na mpaghara nke ajụjụ dị na Turkey ya na obodo ahu.
Ọ bụ ụdị njem a na gburugburu ebe obibi na gburugburu ebe obibi.
Ọ dị nchebe karịa ụdị njem ndị ọzọ.
Okporo ụzọ na-eme ka ibu okporo ụzọ dị mfe.
Na mkpokọta, n'adịghị ka usoro njem ndị ọzọ, enwere nkwa ọnụahịa dị ogologo oge.
Ọ bụ ezie na enwere mgbochi mgbochi n'okporo ụzọ na ntụgharị mba ụwa, ọ bụ uru mgbanwe n'ihi na ọ bụ ụdị njem njem kachasị amasị ndị mba ọzọ.
Ọ bụ ezie na oge ị ga-agafe agafe dị ntakịrị karịa okporo ụzọ, a ka edozila oge njem ndị a.
Ọ bụ ụdị njem njem kachasị dabara adaba na ọnụ ahịa maka nnukwu ibu na nnukwu ibu.
Transportationgbọ njem ụgbọ okporo ígwè bụ ụdị njem njem na-ewu ewu n'ihe metụtara ntụkwasị obi ya, ịdabere n'ebe ndị mmadụ nọ ma yabụ ihe egwu nke njehie, na-ebelata ọnụ ahịa asọmpi, uru dị n'okporo ụzọ na ịmepụta ngwọta gburugburu ebe obibi.
Ebe ọ bụ na ọ dabara maka njem njem, ọ nwere uru nke mbenata njupụta (dịka ibu nke okporo ụzọ) nke ụdị njem ndị ọzọ kpatara.
Ọ bụ naanị ụdị njem njem nke ọnọdụ ihu igwe na-adịghị emetụta.
Post oge: Jul-11-2020